Ngathi | I-Wuxi Qingyuan Laser Technology Co., Ltd.
Ukusukela oko yasekwa ngonyaka ka-2008, Cheeron Laser (QY Laser) iye gqolo ukuphuhlisa ukunika abathengi ezikumgangatho ophezulu CNC laser ukusika oomatshini ngamaxabiso nomtsalane kwaye yenye amashishini phambili e-China.
I-Cheeron Laser (i-QY Laser) yasekwa ngo-2008, yazinikezelwa kuphela kumatshini wokusika we-fiber laser R & D, uyilo, imveliso kunye nentengiso. Sinikela ingqalelo kwitekhnoloji, umgangatho, usetyenziso, ukuhambelana kwemakethi kwaye sithathe "ukusebenza okuphezulu, ukusebenza okuphezulu, ukuchaneka okuphezulu" njengenjongo yethu. Sikwavelise ngaphezulu kwe-80 yemodeli yeemveliso, uhlobo ngalunye lomatshini lufikelele kwinqanaba elikhokelayo lasekhaya nakwamanye amazwe.
Yintoni eyenza iCheeron Laser (QY Laser) yahluke kuma-90% kwimizi-mveliso yasekhaya eqhuba oomatshini bokucheba i-fiber laser:
1. Siqale ukuvelisa oomatshini befayibha i-laser ukusika ukusukela ngo-2008. Iminyaka eli-12 kule nkalo izise amava amaninzi.
2. Sizimisele koomatshini bokusika i-fiber laser ukusuka kwi-watts ezingama-700 ukuya kwii-watt eziyi-15000, kwaye sizimisele ukuyenza eyona nto ilungileyo ukuze sikhuphisane nabanye. Ngoku sinikezela ngeewatts eziyi-1500 ukuya kwii-20000 watts.
3. Inkampani ineqela elomeleleyo le-R & D, kubandakanya iinjineli ezingama-65, phakathi kwazo zili-10 ezinamava angaphezulu kweminyaka eli-10 koomatshini befayibha ye-laser, abagxila kuphuhliso lobuchwephesha obutsha kunye nezixhobo zobuchwephesha, ezisenza ukuba sihlale inkokheli yentengiso.
4. Sineqela lenkonzo elisemagqabini elinamava kunye neenjineli zasekuhlaleni ezingama-60 kunye neenjineli zangaphandle ezi-5.
Ngaphandle koko, sineqela elinamandla lobuchwephesha elinokubonelela kuphela ngoomatshini abaqhelekileyo, kodwa likwenze ngokwezifiso zabo ngokweemfuno zabathengi.
Iqela lethu eliphambili lingumnikazi we-postdoctoral kunye nobugqirha, abanemvelaphi kwizicelo ze-laser kunye nophando lwangaphandle, kwaye ngaphezu kweminyaka eyi-10 yamava kwi-laser shishini.
Iqela lobugcisa: sinamagcisa angama-65
Iinjineli eziPhezulu zezoBugcisa ezi-8, ikakhulu ezinoxanduva lwe-laser R & D.
Amagcisa aphakathi angama-25, ikakhulu ajongene nenkxaso yobuchwephesha ngaphambi kokuthengiswa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, ukuqinisekisa uzinzo lomsebenzi womatshini kunye nokuthembeka kwintengiso;
Iinjineli zobugcisa ezingama-32 ezincinci, ikakhulu ezinoxanduva lokuvelisa kunye nolawulo lomgangatho, ukuqinisekisa umgangatho ophezulu, oomatshini abasebenza ngokugqibeleleyo kubathengi.
Inkampani ibambelela kumbono "wokuphumelela ngomgangatho". Emva kweminyaka esi-8 yophuhliso nokukhula, eyona nto ibalulekileyo kukuphumelela kwintembeko yabathengi kunye negama elihle.
Siqinisekile ukuba liqabane lakho elihle!